အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေရဲ့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ မြင်ကြတဲ့အမြင်များ
အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘယ်လိုလူအဖြစ်မြင်ကြသလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်.။ တနည်းအားဖြင့်တော့ သူတို့အောင်မြင်လာကြတဲ့အပေါ်အဲဒီ့အမြင်တွေက အများကြီးအ‌ထောက်အကူပြုနေတာပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် သူတို့ကိုယ့်သူတို့ ပြန်တွေးတတ်ကြတဲ့အတွေးအခေါ်အချို့ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ရောက်တဲ့နေရာမှာ ရှင်သန်နိုင်ဖို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါ။
ခုကာလနဲ့တိုက်ဆိုင်တာမို့ ဒီစာသားလေးကိုတွေးမိသွားတာပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတော်တော်များများ ဖျားတဲ့သူကဖျား၊ Q ဝင်တဲ့သူကဝင်နဲ့ဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်အတွက်လည်း အရမ်းနီးကပ်လာပါလားလို့ ခံစားမိလာတာပါပဲ။ တကယ်တော့ ကွေးသောက်လက် မဆန့်မီ၊ ဆန့်သောလက်မကွေးမီ ဆိုတဲ့ စကားလိုပါပဲ၊ ဘယ်သူမဆို ကိုယ်မမြင်ရတဲ့ သေခြင်းတရားဟာ ကိုယ်နားဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို မေ့နေတတ်ကြတာပါ။
အဆိုးဝါးဆုံးနေ့တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာ သင်ထိုင်ပြီးစိတ်ညစ်နေရုံနဲ့တော့ အခက်အခဲကပြေလည်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အခက်အခဲတွေ၊ အဆိုးတွေကို သင်ဖြေရှင်းနိင်မယ့်နည်းလမ်းကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်သလို၊ သင်မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင် သင့်ရဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားရင်း ထပ်မံကြိုးစားနိုင်ဖို့ အားတင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့လို ဆိုးဝါးတဲ့နေ့တွေကြုံလာတဲ့အခါမှာ သင်ပြန်ပြီးသတိရသင့်တဲ့အချက်တွေဖတ်ပြီးအားတင်းလိုက်ပါ။
ကိုယ်က အရမ်းကြီး အထူးတလည်ဂရုစိုက်နေပေမယ့် တကယ်တမ်း ဂရုမစိုက်သင့်တဲ့အရာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်. တခါတလေ ကိုယ်ကသာ အရမ်း တဖက်လူဘယ်လိုထင်မလဲတွေးနေပေမယ့် ကိုယ်အကြောင်းကို တဖက်လူက သိတောင်မသိလိုက်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့။ တခါတလေ ကိုယ့်ရဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တခုခုပေါ့. ။ အဲဒါဆိုရင် သင်ဂရုမစိုက်သင့်တဲ့အရာတွေကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအုံးနော်။